Afaka amin’ny fotoana fohy | mandimby maharo
Afaka amin’ny fotoana fohy	Posted on 24 May 2012 by Mandimby Maharo	Tena tsy azon’ilay rangahy nikabary teny Ambohitsirohitra tamin’ny Talata 22 Mai iny ny tena dikan’ny hoe Fahafahana miteny. Tsy mahataitra izany satria raha ny zavatra hita hatramin’izay nitondrany izay dia tsy mbola nisy zavatra iray mba hainyka izany zava-tsarotra izany ve ho takany.
“Malalaka ny fanehoan-kevitra …rehefa amin’ny fampielezan-kevitra”. Dia ho ferana mandritry ny andro vitsy anaovana fampiekezan’kevitra ihany izany ny olona vao mahazo milaza izay mba maharary azy. Ary amin’izany fampielezanj-kevitra izany aza anie tsy ny mpanao politika izay mitady seza ve ary moa no tena miteny fa ireo olona dia mihaino? Ka inona no fahalalahana amin’izany? sa ve hoe izao ianareo malagasy tsy mahazo miteny, fa amin’izany anjaranay koa no miteny?
Tsy ny toerana ihany hoy aho no mitondra ny atao hoe fahafahana fa na ny fotoana koa aza. Ary io fahaizana maka ny fotoana mety sy manararaotra ny fotoana io no tena tsy mbola hain’ny mpianao politika rehetra eto. Advertisements